Hiob anoyi no ntoaso (1-28)
‘Mepɛ sɛ me ne Onyankopɔn kasa’ (3)
“Moyɛ ayaresafo hunu” (4)
“Minim sɛ midi bem” (18)
Obisaa nea enti a Onyankopɔn bu no sɛ ɔtamfo (24)
13 “Ampa, m’ani ahu eyi nyinaa,M’aso ate, na mate ase. 2 Nea munim no, me nso minim;Monkyɛn me. 3 Me de, ade nyinaa so Tumfo no ankasa na mepɛ sɛ me ne no kasa;Onyankopɔn na mepɛ sɛ miyi m’ano wɔ n’anim.+ 4 Mo de, atoro na mode aguare me;Mo nyinaa moyɛ ayaresafo hunu.+ 5 Sɛ moka mo ano tom a,Anka ɛbɛkyerɛ sɛ munim nyansa.+ 6 Mepa mo kyɛw, muntie m’anoyi,Na muntie m’ano asɛm. 7 Mobɛka asɛm a ɛnyɛ nokware ahyɛ Onyankopɔn ano anaa?Anaa mobɛka nnaadaasɛm wɔ Onyankopɔn din mu? 8 Moakogyina n’akyi?*Anaa mopɛ sɛ moka nokware Nyankopɔn no asɛm ma no? 9 Sɛ ɔhwehwɛ mo mu a, mohwɛ a ebesi mo yiye?+ Anaa mobɛdaadaa no sɛnea modaadaa onipa dasani no? 10 Sɛ moyɛ sɛ mobɛyɛ animhwɛ wɔ kokoam a,+Sɛnea ɛte biara, obetwiw mo anim; 11 N’anuonyam kɛkɛ remma munsuro anaa?Na ne ho hu rentɔ mo so? 12 Mo anyansasɛm* yɛ abebusɛm hunu; ɛte sɛ nsõ.Nsɛm a mode yi mo ho ano no* yɛ mmerɛw sɛ dɔte. 13 Monka mo ano ntom wɔ m’anim na menkasa, Na nea ɛbɛba me so biara mmra! 14 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mede me ho to ɔhaw mu?*Na adɛn nti na ɛsɛ sɛ mede me nkwa* to me nsam? 15 Sɛ obekum me mpo a, mɛkɔ so ara atwɛn;+Mɛka m’asɛm* wɔ n’anim. 16 Anka obegye me nkwa,+Efisɛ ɔbɔnefo* biara rentumi mma n’anim.+ 17 Muntie m’asɛm yi yiye;Monyɛ aso ntie m’ano asɛm. 18 Hwɛ, seesei maboaboa m’asɛm ano rekɔ asɛnnibea;Minim sɛ midi bem. 19 Hena na ɔne me bedi asi? Sɛ mimua m’ano a, anka mewu!* 20 O, Onyankopɔn, nneɛma abien pɛ na mepɛ sɛ woyɛ ma me,Sɛnea ɛbɛyɛ a meremfa me ho nsie wo: 21 Yi wo nsa duruduru no fi me so kɔ akyirikyiri,Na mma wo ho hu nnhunahuna me.+ 22 Ɛbɛyɛ a, kasa ma minyi ano,Anaa ma menkasa, na wo yi ano. 23 Mfomso bɛn na madi, na bɔne bɛn na mayɛ? Ma minhu me mmarato ne me bɔne. 24 Adɛn nti na wode w’anim asie+Na wubu me sɛ wo tamfo?+ 25 Ahaban a mframa rebɔ no yi na wubehunahuna no?Anaa sare* a awo yi na wubedi akyi? 26 Efisɛ daa wokyerɛkyerɛw me ho nsɛm yayaayaw,Na woma mitua bɔne a meyɛe wɔ me mmeranteberem no ho ka. 27 Wode me nan abɔ dua mu,W’ani di m’akwan nyinaa akyi,Na baabi a mede me nan si biara, wohyɛ hɔ nsow. 28 Enti onipa porɔw* te sɛ biribi a aporɔw atetew;Ɔporɔw te sɛ ataade a nwewemmoa awe.
^ Anaa “Mopɛ sɛ moka bi ma no.”
^ Anaa “Mo akasabebu.”
^ Nt., “Mo akyɛm.”
^ Nt., “Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mede me honam hyɛ me se mu?”
^ Anaa “Mɛpere m’akwan.”
^ Anaa “ɔwaefo.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Sɛ obi betumi ne me adi asi a, anka memua m’ano na mawu.”
^ Eyi yɛ hwiit anaa baali dua a aka wɔ afuw mu bere a wɔatwa aduan no awie.
^ Nt., “ɔporɔw.” Ɛbɛyɛ sɛ Hiob ho asɛm na ɔreka.